फर उत्पादनहरु को अनिवार्य लेबल
फर उत्पादनहरु हाम्रो देशको अनिवार्य लेबल को क्षेत्र मा 12 अगस्ट 2016 देखि मान्य छ। निर्माता, आयोतकों, विक्रेता, यस्तो लुगा साकार विशेष संकेत उत्पादनहरु संग सुसज्जित हुनुपर्छ। तिनीहरूले उपस्थिति नियन्त्रण गर्न। निर्माण, ढुवानी, उत्पादन को बिक्री मा जानकारी एक जानकारी सिस्टम, कर अधिकारीहरु लागि जिम्मेवार छ जो प्रसारित गर्न।
वैधता को सिद्धान्त
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग कारण अपनाए व्यवस्था गर्न अनिवार्य भयो।2चरणमा, मस्यौदा मूल भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
पाइलट (1 अप्रिल 2016): यो पूरा गर्न अंकन सम्भव थियो, तर यति थियो गर्न विफलता लागि जिम्मेवारी;
मुख्य (अगस्ट 12): नियम सबै लागि अनिवार्य हुन्छन्।
कागजात हस्ताक्षर पछि यसको स्तर लागि अनिवार्य हुन्छन्। पालन गर्न विफलता जिम्मेवारी पनि आउँछ।
लेबलिंग को अवधारणा
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग मा व्यवस्था सरल कदम को एक नम्बर पनि समावेश छ। को उद्यमी उत्पादन नियन्त्रण साइन संलग्न को कर्तव्य आउँछ वा उत्पादन आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्नुहोस्।
यो खरिद, एक विशेष जानकारी स्रोत मा आयात वा माल को बिक्री मा जानकारी, "अंकन" भनिन्छ प्रदान गर्न महत्वपूर्ण पनि छ। यो प्रक्रिया कर अधिकारीहरु निगरानी।
जो उत्पादनहरु मार्क?
त्यहाँ लेबलिंग विषय हो कि माल को सूची हो। यी उत्पादनहरू समावेश:
फर प्रत्येक प्रकार को लागि आफ्नो कोड प्रयोग। व्यवहार मा, सधैं स्पष्ट भएको लेबलिंग प्रयोग कि, वा तपाईंलाई बिना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यो कलर मिंक भने, नियम छ कि छैन भनेर? नोट खण्डमा यो जानकारी पाउन। त्यहाँ कफ र कलर छलफल गर्न फर वस्त्र छन् सजावट विषयको, त्यसैले यस्तो उत्पादनहरु लागि लेबलिंग आवश्यक छैन भनेर लेखिएको छ।
को अंकन गर्दा आवश्यक छैन?
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग मा व्यवस्था जसको लागि यो प्रक्रिया आवश्यक छैन उत्पादन, बारे जानकारी पनि समावेश छ। यी कर्तव्य-मुक्त पसलहरूमा मा उत्पादनहरु यूरेशियन आर्थिक संघ निर्यात, भन्सार पर्यवेक्षण अन्तर्गत परिवहन, बिक्री समावेश गर्नुहोस्। यो स्तर र प्राविधिक नियमहरु को क्षेत्र मा परीक्षण, साथै वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनियों प्रजाति को प्रदर्शन भण्डारण लागि अभिप्रेरित सामान समावेश छ।
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग आवश्यक छैन, र यदि सामान एक रूपमा आयात गर्दै मानवीय सहायता। वा यदि यो जफत भएको थियो, जफत, पक्राउ। प्रक्रिया भण्डारण गरिएका वा निर्माता द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो ती उत्पादन, को लागि आवश्यक छैन। एउटै अवस्थामा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उद्देश्यको लागि कुरा प्रयोग गर्दै जहाँ लागू हुन्छ। लेबलिंग विक्रेता फर्के गरिएका सामान लागि आवश्यक छैन।
एक गप्पी साइन के हो?
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग तत्व देखि सुरक्षा को एक पारंपरिक फारम को अस्तित्व presupposes। यो कपडा, कागज वा प्लास्टिक सिर्जना गरिएको छ। यसलाई -40 डिग्री सम्म सामना गर्न सक्छन् किनभने चिन्ह, चिसो-प्रतिरोधी छ। यस्तो तत्व तीन प्रकारका विभाजित छन्:
सिलना सिउनी उत्पादन स्थित, त्यसैले यो पनि उत्पादन चरण मा सुरक्षित छ। को टास्ने विशेष लेबल मा माउन्ट छ र उपरि लुपमा वा भ्कुन्डाउने साधन राखिएको। को विच्छेदमा क्षति गराउँछ किनभने सबै वर्ण फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले लाल र हरियो मा आउनुहोस्। रूसी लागि - पहिलो रंग विदेशी उत्पादन, र दोस्रो लागि हो।
फर उत्पादनहरु को लेबलिंग महत्वपूर्ण जानकारी राख्नु डिजाइन गरिएको छ। लेबल उत्पादन समूह, देश कोड र नम्बर को नाम हुनुपर्छ। पनि साइन मात्र विशेष उपकरणहरू द्वारा पढ्न जो जानकारी पनि समावेश छ।
यो एक कथा संकेत एक संगठन सिर्जना - Gosznak। सबै बजार सहभागीहरू त्यहाँ सर्टकटहरू को आदेश छ जसमा एउटा सम्झौता हुनुपर्छ। मूल्य सिलना र 15 rubles को गोंद चिन्ह, र ओभरले - 22।
पछि यो संघीय कर सेवा पछि छ यो उत्पादनहरु सन्दर्भमा सबै विवरण निगरानी गर्न महत्त्वपूर्ण छ। फर उत्पादनहरु को लेबलिंग विशेष आरएफआईडी-पाठकहरूलाई को प्रयोग पनि समावेश छ। तिनीहरूले एक चेक मार्क संग बार कोड पढ्न आवश्यक छ। साथै, प्रक्रिया वैवाहिक सामान पहिचान हुनेछ।
एक विशेष कार्यक्रम सेट आरएफआईडी-उपकरणमा यो सबै काम पूरा गर्न। यसलाई खुलेर साइट FNS डाउनलोड लागि उपलब्ध छ।
विभिन्न चरणमा मा लेबलिंग नियम
फर IFTS लगाइँदै सबै आयोतकों र निर्माताहरु लागि अनिवार्य छ। प्रत्येक साइन को आयोतक मा एक सिरियल नम्बर, जानकारी पनि समावेश छ।3दिन भित्र ढुवानी पछि "अंकन" महत्त्वपूर्ण प्रणाली मा डाटा स्थानान्तरण गर्न छ। यो प्रक्रिया पूर्व बिक्री को लागि प्रदर्शनी वस्तु गर्न गरिन्छ।
आयोतकों व्यक्तिहरूलाई देखि सामान लिन, तपाईं आदेश र संकेत संलग्न गर्न, र त्यसपछि जानकारी स्थानान्तरण "लगाइँदै" मा आवश्यक छ। यस मामला मा समय सीमा। यो प्रक्रिया थोक व्यापारी र पुनर्विक्रेताहरु गर्न गरेको हुनुपर्छ। उत्पादनहरु किनमेल गर्दा ग्राहकहरु3दिनको लागि "लगाइँदै" मा जानकारी बनाउन आवश्यक छ। माल को यूरेशियन आर्थिक संघ भन्दा ओसारपसार गर्दा, डाटा को स्थानान्तरण आवश्यक छ।
सबै बजार सहभागीहरू अन्यथा त्यहाँ जिम्मेवारी हो, लेबलिंग को दायित्व पालना गर्न आवश्यक छ। Violators क्षतिपूर्ति तिर्न पर्छ:
50-100 हजार rubles - संगठनहरूका लागि .;
5-10 हजार rubles -। अधिकारीहरु र उद्यमीहरू लागि।
खरिद र उत्पादनहरु को बिक्री लेबलिंग बिना पनि जरिवाना निर्वहन गर्न खतरामा। रकम स्थापना को फारम फरक हुन सक्छ।
सामान असल, सम्भव जफती बाहेक। एक अंकन प्रदान गरिएको छ र आपराधिक दायित्व, त्यसैले प्रत्येक खुद्रा प्रतिष्ठानबाट इन्कार गर्दा, यी नियमहरू अनुगमन गर्नुपर्छ। सजायको ठूलो रकम मा व्यवस्था भंग समूह गर्दा थप गम्भीर हुन सक्छ।
उत्पादनहरु को अंकन उत्पादनहरु गुणस्तर साथै आगमन माल को नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। एक विश्वसनीय कम्पनी सबै साधारण स्वीकार नियम अनुसार काम गर्दछ प्राप्त कुराहरू, को लेखा विशेषता स्टोर हुनुपर्छ।
एक LLC वा लिमिटेड दायित्व कम्पनी के हो?
नाम परिवर्तन गर्दा के म VAT नम्बर परिवर्तन आवश्यक
रातो चलिरहेको लागि दण्ड। यातायात infraction
पेंशन कोष योगदान र कसरी बचत व्यवस्थापन गर्न
खाजा ब्रेक। श्रम कोड को लेख 108। बाँकी र भोजन लागि विश्रामहरू
कसरी गुना ओरिगेमी "हृदय": चरण पुस्तिका द्वारा चरण
यो मासु सोलांका। स्वादिष्ट खानाको लागि पकाउनुहोस्
अभिनय - अभिनय छ
मार्था Argerich: जीवनी, पुरस्कार, व्यक्तिगत जीवन
दाऊदले लिभिङ्स्टोन: जीवनी, यात्रा र खोज। त्यो अफ्रीका मा दाऊदले लिभिङ्स्टोन खोलियो?
इवान Poddubny: जीवनी। आफ्नो जीवन Ivana Poddubnogo को वर्ष